Life Wild | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! Life Wild | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
Life Wild waa lacagta dhabta ah, naadi online horumariyo by IGT (International ay ciyaareyso ay Technology) taas oo ah magac caanka ah ee dunida ka mid ah kulan casino. theme ee booska ku salaysan tahay nooca quruxda badan ee qaarada Afrika iyo xoolaha ku nool. asalka ah lacagta dhabta ah, naadi online ayaa hawdka Afrika hoos qorrax ladooran cajiib ah oo dhalaalaya orange. soundtrack The waa rabshad iyo leedahay dhadhan caadiga ah Afrika, waxa uu taas ku haboon niyadda ee ciyaarta. animations The way ku farxaan muuqaal ah sida iyo sida Libaaxa boodayaa sii badan. Ciyaarta ayaa qoreysa qaar ka mid ah muuqaalada bonus oo xiiso leh in ay la wareegaan inaad fiiro.
Journey in Life Wild
Life Wild waa Afyare video la a 5 duntu iyo 3 saf oo waxaa la ciyaaray 10 paylines go'an. Calaamooyinka Afyare waxaa loogu talagalay sida sawiro rinji iyo muuqdo xoolaha kala duwan ee laga helay hawdka Afrika. Calaamooyinka sare qiimeeyo waxay ka kooban yihiin maroodi ah, zebra a, geri ah, wiyisha iyo shabeelka a. The Astaanta Wild waa libaax taas oo u muuqata on duntu ku 2, 3 iyo 4 oo keliya. Wild badali karaa calaamad kasta oo ku kala firdhi, marka laga reebo. Astaanta kala firdhiso waa map-ka ee qaarada Africa . Calaamooyinka hooseeyo qiimeeyo waa A, K, S iyo J. ugu yaraan iyo ugu badnaan qadaadiicda size waa 0.10 iyo 100 siday u kala horreeyaan.
Tani lacagta dhabta ah, naadi online can earn you some big rewards by offering special rewards like dhigeeysa Free iyo ballaarinta Wilds.
Dhigeeysa Free - Waxaa la huriyay degtey 3 ama calaamado kala firdhiso ka badan meel kasta oo duntu ka inta lagu guda jiro kulanka salka. caga 3, 4 iyo 5 calaamadaha kala firdhiso ku siin doonaa 10, 15 iyo 20 kulan free siday u kala horreeyaan. All guul is Laab iyo astaanta duurjoogta xiran yahay (haddii ay jiraan) si aad u hesho dakhli ka sarreeya.
Ballaarinta Wilds - Waa laga heli karaa inta lagu guda jiro kulanka salka iyo waxaa firfircoonaan by helitaanka calaamad duurjoogta on duntu ku. Wild on ambadeen wax kasta oo ballaarin doonaa si ay u daboosho ambadeen in dhammaan summadaha duurjoogta ah halkan oo keliya iyo ka heli doontaa inaad guul weyn.
Faafiye - haddii aad u maamulaan si dalka 5 ama calaamadaha Shabeel more, waxaad ka heli doontaa 125 × aad bet hore.
Life Wild waxay bixisaa interface aad u siman ay goobta Kaapelitalo Afrika oo ay taageerayaan animations qurux badan oo soundtrack eegayey. The feature bonus Free dhigeeysa waa highlight ee lacagta dhabta ah, naadi online oo ay leedahay awood aad u weyn in aad shaqaysato guul weyn. It has an RTP percentage of 95% taas oo ku filan si ay booska sii shot a. Tani waa lacag dhab ah naadi online taas oo waa in aad dhab ahaan ay isku dayaan.